Ndụmọdụ iji nwee ihe ịga nke ọma na atụmatụ iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa nke ụlọ ọrụ gị | Ozi ECommerce
Ndụmọdụ iji nwee ihe ịga nke ọma na atụmatụ iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa nke ụlọ ọrụ gị
Mgbe ị nwere eCommerce, ihe ịchọrọ bụ na kwa ụbọchị ị na -eteta n'ụra ahịa, ọbụlagodi na nke ahụ pụtara ịkwadebe ọtụtụ iwu wee ziga ha. Agbanyeghị, iji mezuo nke a, ị ga -emerịrị a atụmatụ iguzosi ike n'ihe na, mgbe ụfọdụ, nwere ike imeri gị. Ma ọ bụ amaghị ihe ị ga -eme ma ọ bụ otu esi eme ya.
Ọ bụrụ na ị na -echegbu onwe gị maka eziokwu ahụ bụ na ha na -azụta gị otu oge ma ghara ịlaghachi na webụsaịtị gị, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndị ahịa chee na a hụrụ gị n'anya, ma ọ bụ na ịchọrọ ịtụgharị onye ọrụ ka ọ bụrụ onye ahịa na onye ahịa ka ọ bụrụ onye ahịa na -eguzosi ike n'ihe. atụmatụ bụ nke nsonaazụ kacha mma na -enye. Mana olee otu ị ga -esi jikwaa rụọ ya nke ọma?
1 7 echiche na ndụmọdụ iji nwee ihe ịga nke ọma na atụmatụ iguzosi ike n'ihe gị
1.1 Kwụsị ire
1.2 Nlebara anya nke onwe
1.3 Ọnụahịa pụrụ iche
1.4 Lekọta nnyefe ngwaahịa
1.5 Ego, onyinye na Kupọns
1.6 Jụọ maka ntụnye
1.7 Gaa n'ihu ihe omume ndị mbụ
7 echiche na ndụmọdụ iji nwee ihe ịga nke ọma na atụmatụ iguzosi ike n'ihe gị
Obi abụọ adịghị ya na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na -esi ike taa mgbe enwere ọtụtụ ogbunigwe nke ngwaahịa na ụlọ ahịa. Ọtụtụ n'ime ha na -ere otu ngwaahịa, mgbe ụfọdụ ọnụ ahịa dịka ndị ọzọ, mana ị ga -ahụ na enwere ụfọdụ na -ere karịa maka eziokwu dị mfe nke ịbụ onye ha bụ. Ha nwere aghụghọ? N'ezie ... kedu nke ọ bụ? Ndị atụmatụ iguzosi ike n'ihe.
Kpọsị, usoro a dabere na iji akụrụngwa eCommerce dị n'aka iji nweta nlebara anya nke onye ahịa ahụ yana na, na ịzụrụ n'ọdịnihu, ha ga -ahọrọ ha ọzọ karịa asọmpi ahụ. Iji mee nke a, ọ nweghị ihe dị ka:
Mba, anyị ara ara. Anyị anaghịkwa agwa gị na ị ga -ehichapụ eCommerce gị wee malite ncha na ihe ọzọ. Ndụmọdụ a na -elekwasị anya na netwọkụ mmekọrịta. Ọ bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ ihe ha na -eme mgbe ha na -akpọsa na Facebook, Instagram ...
Ike gwụrụ ndị ọrụ, ihe kacha dịrị nchebe bụ na mgbe sekọnd atọ ha ga -agbapụ n'akwụkwọ ahụ (na 10 ha nwere ike hapụ ibe ahụ). Yabụ iji zere ọgba aghara a, ihe kachasị mma bụ ịmebe mmekọrịta na netwọkụ, na ozi, akwụkwọ akụkọ ... Ị gwalarị na ị nọ ebe ahụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ihe, mana ị gaghị anwa ịmanye ngwaahịa gị anya ka ha zụta n'aka gị.
Nlebara anya nke onwe
Ndị mmadụ na -achọ ka a nụ ma gee ha ntị naanị nwa oge. Ya mere, gaa n'inye azịza izugbe ma lekwasị anya n'ihe ndị ahịa chọrọ. Gbalịa ichegbu onwe gị maka ihe onye ahịa ọ bụla chọrọ ka ọ ga -esi dị mkpa.
Kedu ka esi enweta nke a? Ikwu na -etinye ọkọlọtọ azịza ma na -achọ inye onye ahịa ahụ nzaghachi kachasị dabara maka ya.
Ọnụahịa pụrụ iche
Gịnị ma ọ bụrụ na onye ahịa etinyela iwu ise? Ma ọ bụ iri ise? Ịcheghị na o kwesịrị ihe maka ya? Kwere ma ọ bụ na ikwenyeghị, inye ndị ahịa ahụ kwughachiri iwu ha ụgwọ, ma ọ bụ ndị tụkwasịrị gị obi ọzọ, bụ ụzọ dị mma isi wulite iguzosi ike n'ihe. Ya mere gbalịa nye ha mbelata ego, kaadị, diplọma ma ọ bụ onyinye.
Ha ga -enwe ekele maka ya na okwu ọnụ ka bụ ngwa ọgụ siri ike na mgbasa ozi.
Lekọta nnyefe ngwaahịa
Obi abụọ adịghị ya na nkwakọ ngwaahịa dị oke mkpa. Ọtụtụ. Ọ bụghị naanị n'ihi na ị nwere ike merie ndị ahịa, mana n'ihi na ọ bụ ụdị iguzosi ike n'ihe ọzọ. Ị hụghị ya? Cheedị echiche ihe ndị a:
Ị zụrụ ngwaahịa abụọ n'ụlọ ahịa abụọ dị iche iche, mana ihe yiri ya. Ihe ngwugwu nke mbụ abịarute. Ọ bụ igbe nkịtị ị mepere wee chọta ngwaahịa nke ị nyere iwu n'ime.
Ugbu a bụ nke na -abịa. Igbe ahụ abụghị aja aja, mana ejiri ntụpọ polka ojii chọọ ya mma n'okpuru okirikiri uhie. Na mgbakwunye, kama ịnwe teepu mbukota, ọ nwere teepu pụrụ iche nke nwere aha ụlọ ọrụ mana ejiri ya chọọ ya mma nke na anaghị ahụ ya nke ọma. Na eriri.
Ị mepee igbe ahụ wee hụ na ngwaahịa ị nyere n'iwu na -abịa n'akpa pụrụ iche site na ụlọ ahịa ahụ, na o nwere mkpịsị odee, ma ọ bụ akara, ma ọ bụ kalenda.
Anyị na -ajụ gị, kedụ nke ị ga -ahọrọ? O doro anya, ị ga -ekwu nke abụọ. Mgbe ahụ iji mee ka ndị ahịa gị kwenye na eCommerce gị ọ dị mkpa ilekọta nkọwa ndị ahụ maka ha, maka na ha bụ ihe nwere ike ime ka ha na -azụrụ ihe ọzọ n'ihi na ha ma na ha bụ otu. Ọ naghịkwa ewe ọtụtụ ihe ime onyinye azụmaahịa nwere akara ngosi na Martgifts. Ọ bụ itinye ego nke nwere ike nweta nsonaazụ dị mma na iguzosi ike n'ihe ndị ahịa.
Ego, onyinye na Kupọns
Kedu ihe ma ọ bụrụ na gị na ndị ahịa gị 'gwuo egwu' 'n'ịchụ nta akụ? Ọ bụ egwuregwu na -atọ ụtọ ị nwere ike iji mgbe eCommerce gị buru oke ibu na ị maghị ọtụtụ? Kedu ihe ọzọ, ọ gụnyere web yana netwọkụ mmekọrịta. Kedu ihe ị ga -eme? Ọ dị mma, zoo akwụkwọ ikike ego, onyinye ma ọ bụ mwepụ na ibe ụlọ ahịa gị n'ịntanetị.
Ị nwere ike ịnye akara site na netwọkụ mmekọrịta wee tinye ndị ọrụ ka ha gaa na webụsaịtị gị (n'agbanyeghị, ha maara ya wee hụ ihe ị na -ere).
Kwere ma ọ bụ na ikwenyeghị, ọchịchọ ịmata ihe, ịgba chaa chaa na ọchịchọ imeri dị ike nke ukwuu na ndị mmadụ ga -enwe aerụrị.
Jụọ maka ntụnye
Chee echiche banyere onye ahịa. Ọ bụ onye na -eme usoro ịzụrụ ihe niile site na mgbe itinye ngwaahịa ahụ n'ime ụgbọ gị ruo mgbe ị kwụrụ ụgwọ ma nata ihe ịzụtara. Ịcheghị na ha ga -enwe echiche ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ nwere mmejọ na yinye ịzụrụ ihe? Ọ bụrụ na ị jụọ ya echiche ya, ọ nwere ike bụrụ na ọ ga -egosi njehie, isi ihe ndị ọ funahụrụ ma ọ bụ ihe masịrị ya.
Dabere na nkwupụta ndị a niile ị nwere ike melite ahụmịhe onye ọrụ nke ndị ahịa gị, ma mee ka ọ dị mfe, ngwa ngwa na ka mma ịzụta na weebụsaịtị gị karịa nke ndị asọmpi gị.
Gaa n'ihu ihe omume ndị mbụ
Ị nwere ike ịnye mwepu ego ka mma, ma ọ bụ gaa n'ihu asọmpi gị ka ndị ọrụ gị wee malite ịhụ ngwaahịa mbụ nke ihe omume ahụ n'ihu onye ọ bụla ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, na ekeresimesi, gịnị ma ị bido tinye ụfọdụ ọnya ahịhịa? Leba anya na atụmatụ Mercadona, nke nwere roscones de Reyes n'ụlọ ahịa ya…
Dị ka ị hụrụ, enwere ọtụtụ echiche iji wulite atụmatụ iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa. Nke a apụtaghị na ị ga -emejuputa ha niile, kama họrọ ndị nke na -anọchite anya azụmaahịa gị kacha mma iji nweta nsonaazụ dị mma, ma ndị ahịa gị ma ndị ahịa gị. Ị nwere ike ịkwado ọtụtụ echiche iji wulite iguzosi ike n'ihe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ndụmọdụ iji nwee ihe ịga nke ọma na atụmatụ iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa nke ụlọ ọrụ gị
eCommerce: kedu ihe ọ bụ
Kedu ka covid-19 siri gbanwee ahụmịhe ndị ahịa